FreedomPop, yemahara kufona uye data, zvinoshamisa asi ichokwadi | IPhone nhau
FreedomPop, yemahara kufona uye data, zvinoshamisa asi ichokwadi
Dzimwe nguva tinonzwa zvinhu zvinoita kunge fungidziro kwatiri, rugare rwepasirese, kugovaniswa kwekudya pasi rese, musika wakaringana, uye nei zvisingaiti, data remahara uye risingaperi uye chiyero chekufona. Zvese izvi zvinonzwika seiko, handizvo here? Ndiro basa iro FreedomPOP inotarisira kupa kuSpain. Isu tatove tawana FreedomPop kune rimwe divi redziva, ichi chakasununguka uye chemahara chiyero chakatopihwa muUnited States of America neGreat Britain, asi hazvo, kuSpain isu tinowanzo, kana asiri wekupedzisira, ivo vekupedzisira rudzi urwu. ye "kufambira mberi", Ndosaka takashamisika nenhau iyi kuti FreedomPop ichasvika kuSpain muzhizha rino nenhare dzayo yemahara yekufona yemunhu wese.
Mabhero akaridza pamhepo pamusoro pekuuya kweFreedomPop kuenda kuSpain, zvisinei, isu tinogona kutosimbisa nekuda kweshoko ravo repamutemo kuti vachange vari pano, kunyanya mumwedzi mishoma. Muchokwadi, iyo "beta" nguva yakatovhurwa kuSpain, kwaunogona kunyoresa pawebhusaiti yavo kuti uwane kukokwa kubasa iro raizosvika mumavhiki mashoma. Kwete chete isu tichava neyero yekutanga, ine yemahara data uye mafoni, asi isu zvakare tichava neyakazara yemahara kufamba-famba mune runyorwa rwe31 nyika kutenderera pasirese.
1 Chii chinonzi FreedomPop?
2 Chii chinonzi FreedomPop chinotipa?
3 Ndekupi, sei uye riini kwatingawane FreedomPop?
Chii chinonzi FreedomPop?
Mukuda zvimwe, senyika yekushandisa nhare nemitambo, isu tinowana hunyanzvi huri kuramba huchiwedzera kuwanda, hwekuisa zviwitsi mumuromo medu, kuzopedzisira watisiya tine nzara yakatokura uye mukana wekuwedzera uye kugutsa zvido zvedu, zvekuti kana, kuburikidza nebhokisi. Senge mumitambo nekutenga kwakabatanidzwa, kune marudzi maviri evashandisi, avo vanozokwanisa kushandisa sevhisi uye vagogutsikana nezvazvinopa, nezvakanaka nezvayakaipira, uye neavo pasina mubvunzo vanoenda kuzvirongwa zvekuwedzera zveavo iyo mhando ine.
Kune kutanga, sevhisi iri inongowanikwa chete kune Android uye iOS zvishandiso, ndiko kuti, kuonekana nevashandisi veWindows 10 (vari zvakare chikamu chinosara). Isu tinoenderera mberi nekuda kwebingo, uye ndeyekuti maminetsi mazana maviri efoni atinoita achange ari kuburikidza neVoIP, ndiko kuti, tichazoda kubatana kwakaringana kwedata, zvisinei, kana kufukidzwa kwacho kusakwana isu tinogona kushandisa zvakajairwa uye zvazvino kufona, izvo kana, kubhadhara. Chekupedzisira, iyo SIM kadhi iyo yatichada kushandisa sevhisi inodhura chete maeuro mashanu, uyezve, hapana zvachose.
Chii chinonzi FreedomPop chinotipa?
Iyo yemitero modhi muSpain ichave Maminitsi mazana maviri, mazana maviri mameseji uye 200 MBMuUnited States of America, semuenzaniso, tinowana maminetsi mazana mashanu, mazana mashanu mameseji uye 500 MB. Asi kuSpain isu tichawana yakasarudzika uye inoyevedza ruzivo, iyo WhatsApp kunyorera uye nemigwagwa yayo yese, haizoverengerwa muyero Iwe unoreva, isu tinogona kushandisa WhatsApp zvisina muganho, saka kana ukashungurudza WhatsApp kufona uye kutumira mapikicha uye mafaera kuburikidza neWhatsApp, ini ndinogona kukupa iwe zvinopfuura zvakakwana neFreedomPop.
Zvichakadaro, kune ekuwedzeredza kana mamwe masevhisi, isu tichafanirwa kupfuura kuburikidza nebhokisi, heino bhizinesi reRusununguko Sekureva kwevakuru, 50% yevashandisi vayo havamboshandisa peni pabasa, asi hazvo, kana makumi mashanu muzana asara achishungurudza mari yekuwedzera, ivo ndivo vanochengetedza hurongwa. Ehezve, iyo yekuwedzera poindi yeiyo isina muganho WhatsApp, kunyangwe iyo WhatsAppmaniac nyika, iri kuenda kukwezva nhamba hombe yevashandisi vane nyota yekutaura neshamwari dzavo.
Ndekupi, sei uye riini kwatingawane FreedomPop?
Chishoma kana chimwe chinhu chatinogona kukuudza izvozvi, iyo FreedomPop webhusaiti Ikozvino yave kuwanikwa kune vekutanga vakanyoresa muchirongwa, avo vanogashira kukokwa mumazuva anouya uye ndivo vachatanga kuyedza sevhisi. Tichaongorora kufukidzwa, uye kana zvichibvira, tichakokwa mumavhiki anotevera kuburikidza neemail. Pasina kupokana isu takatonyoresa uye isu tichayedza sevhisi kwemazuva akati wandei kana tangove nemukana wekukuunzira ongororo yekuita kweFreedomPop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » FreedomPop, yemahara kufona uye data, zvinoshamisa asi ichokwadi
iOS 9.3.2 Beta 2 inotibvumidza kumisikidza Night Shift uye Yakadzika Simba Mode pamwechete